Xogihii Ugu Dambeeyey Ee Qaabka Loo Khaarajiyey Khashoggi Iyo Cidii Ka Dambaysay | Marsa News
Xogihii Ugu Dambeeyey Ee Qaabka Loo Khaarajiyey Khashoggi Iyo Cidii Ka Dambaysay
October 14, 2018 - Written by editor marsan
Wali waxa warbaahinta Adduunka si weyn u haysta xog-warranka iyo baadhisaha lagu wado qaabkii loo khaarajiyey Wariyihii caanka ahaa ee Sucuudiga u dhashay Mr. Jamaal Axmed Khaashuqji (Gemal Ahmad Khashoggi), balse wararkii ugu dambeeyey oo Wargeyska Foore idiinka soo ururiyay qaddiyadda ninkaasi iyo sidii loo dilay waxa aanu u eegi doonaa warbixntan:
Labadii Bishan Oktoobar oo ku beegnayd Salaasadii Toddobaadkii hore Jamaal Ahmad Khashoggi waxa uu gudaha u galay Qunsuliyadda Sucuudigu ku leeyahay Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga isaga oo halkaasi ku lahaa ballan muddo lix maalmood ah oo ay hore ugu qabteen masuuliyiinta qunsuliyaddu waxaana afaafka hore ee Qunsuliyadda uu kaga tagay oo ku sii sugaysay haweenayda u doonnan ee reer Turki Khadiija, daqiiqadahaasina waxa ay noqdeen markii ugu dambaysay ee indhaha la saaro Jamal Ahmad Khashoggi.
Wararkii ugu dambeeyey ee haddaba soo baxayaa waxa ay sheegayaan in ninkan wariyaha ah qaab qorshaysan oo argagax leh loogu dhex dilay qunsuliyadda kadibna maydkiisa loo tahriibiyey dhinacaa iyo magaalada Riyaad ee caasimadda Sucuudiga, walise aan la kala ogayn hannaanka Turkiga looga saaray meydkiisa.
Warbixino isku dhawdhaw oo ay saacadihii ugu dambeeyey warbaahinta Aljazeera, Kuwa Turkiga iyo kuwa reer Galbeedku ka soo warinayeen qaddiyadda ninkan ayaa waxa ay tibaaxayaan kaartada Wariye Jamaal Axmad Khashoggi loo dilay, sida maydkiisa loo qaaday iyo hannaanka loo fuliyey qorshaha hawl-galkan.
Labadii Oktoobar oo ah maalinta uu ninkani Qunsuliyadda galay waxa gabi ahaanba safaaradda fasax ka ahaa shaqaalihii Turkida ahaa ee qunsuliyadda ka hawl-galayay inkasta oo ay ahayd maalin shaqo oo aanu fasax rasmi ahi jirin, haddana shaqaalaha hoose gaar ahaan kuwa Turkiga ahi waxa ay ahaayeen kuwo la fasaxay waxaana Qunsuliyadda ku sugnaa oo kali ah shaqaalaha Sucuudiyaanka ah, koox cusub oo maalin ka hor soo gadhay Turkiga iyo 15 nin oo si gaar ah hawl-galkan loogu soo diray.
Kamaradaha ilaalada ah ee qunsuliyadda ku xidhnaa wax sawirro ah may duubayn waxaana loo demiyey hab-ku-tala gal ah. Muddo saddex saacadood ah ayuu ninkii Jamal Ahmad Khashoggi ku jiray qunsuliyadda iyada oo ay haweenaydii reer Turkina iyada oo yaabban dibadda taagnayd.
Khadija waxa ay isku dayday in ay qunsuliyadda waydiiso waxa dhacay ee Jamaal muddoda intaasi le’eg ugu maqan yahay gudaha waxaana u soo baxay nin Sucuudiyaan ah oo u sheegay in ay meesha isaga tagto maadaama aanay cidi meeshaba ku jirto. Waxa uu u sheegay in aanay cid aan shaqaale ahayni ku jirin qunsuliyadda. Halkaasi ayay Khadiija shaki weyn ka qaadday isla markiibana ay ku ogaysiisay ciidamada ammaanka ee Turkiga.
Halkan ayay ka bilaabantay qarsoonaanta iyo in la waayo muuqaalkii Wariye Jamal Ahmad Khashoggi waxaanay daqiiqadahaasi noqdeen kuwii adduunka ka wareeriyey maadaama aan la ogayn halka uu ku dambeeyey ninkaasi.
Yaa Amray Dilka Jamal Ahmad Khashoggi?
Waxa Amray dilka ninkan sida la xaqiijiyey Dhaxal-sugaha Boqorka Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan Bin Cabdulcasiis. Shakhsiga ugu awoodda badan wakhtigan Boqortooyada Sucuudi Carabiya.
Xogaha cusub ee haddaba dilka Khashoggi waxa ay tibaaxayaan in rag u diyaarsani qudha kaga jareen Miinshaar gaar ah oo Afaysan taasi oo si arxan darro ah loogu jarjaray jidhkiisa kadibna maydkiisa oo xubin xubin loo jarjaray ku riday kiish gaar ah.
Mudadii dilka la fulinayay waxa ay xoganahi sheegayaan in koox ka mid ahayd 15-ka nin ee hawshan loo soo diray ay ka mid ahaayeen koox maqal iyo muuqaal ahaan u duubayay falkan iyada oo la sheegayo in hawlgalkan si toos ah looga daawanayay Sucuudiga oo uu la socday Maxamed Bin Salmaan si uu u xaqiiqsado gudashada waajibka uu diray.
Markii hawl-galkani dhammaaday waxa qunsuliyadda isa soo taagay dhawr gaadhi oo ka mid ahaa 7 baabuur oo madmadaw kuwaasi oo ku kala sugnaa goobo kala duwan oo hawl-galkan loo xil saaray. Dhammaantood waxa ku xidhnaa taarikada Qunsuliyadda ee Diblomaasiga ah. Afar ka mid ah ayaa yimid qunsuliyadda waxaana ka raacay raggii hawshan fuliyay loona malaynayo in ay sidaa ku saareen maydkii Jamal Khashoggi.
Afar saacadood kadib markii wariye Khashoggi qunsuliyadda galay ayaa gaadhiga ugu dambeeyaa qunsuliyadda ka dhaqaaqay iyada oo ay saddex kalena ka horreeyaan sidaasi ayaanay ku libdheen iyada oo aanay cidina ogayn halka ay u socdeen iyo waxa ay sideen toona.
Laba diyaaradood ayaa wakhtigaasi ku sugnaa Madaarka Istanbul waxaanay u kala baxeen mid Qaahira u duushay kadibna Sucuudiga iyo midda kale oo Dubai ku sii hakatay kadibna Riyaad sidaa ku gaadhay. Sirdoonka Turkigu waxa ay sheegeen in qalabkii wax lagu duubayay iyo raggii hawsha duubista waday ay raaceen diyaaradda Dubai sii maraysay ee sidaa Riyaad ku tagtay.
Arrinka kale ee layaabka noqday waxa uu ahaa in gaadiidkii madoobaa ee gaarka ahaa saddex ka mid ahi u dhaqaaqeen dhinaca barriga oo ay Istanbul uga baxeen dhinaca magaalo-xeebeedda Mersin iyaga oo sii maray Izmit, Gemlik, Iskishehir, Kutahya, Afyon, Konya illaa Mersin halkaasina ay doon kuwa dheeraaya ah ka saareen xubnihii gaadiidkan saarnaa qaar ka mid ah iyo alaabo ay siteen sidaana ugu gudbeen dhinacaa iyo xeebaha waddanka Lubnaan kadibna ay diyaarad uga sii saareen dhinaca Sucuudiga. Xogo kale waxa ay leeyihiin waxa ay noqon kartaa laba mid uun:
In diyaaradda maydka Jamal Khashoggi la saaray iyo in ay kooxdani qaadday maydka oo ay dhinaca badda Lubnaan iyo Turkiga u dhaxaysa marisay. Waxaase la isku waafaqsan yahay in kolay mid ka mid ah labadan qorshe uu ahaa yool habaabin. Waxaana gaadiidkaasi u suurto galiyey in ay kun iyo dheeraad Kiiloo Mitir socdaan baadhis la’aan taarikada ay siteen ee diblomaasiga ah.
Shakiga ugu weyn ee maalintaasi wixii ka dambeeyey dhacay waxa uu noqday markii safaaradda Sucuudiga ee Turkigu ay Madaxda Turkiga ka codsatay in dib loo dhigo baadhitaan lagu sameeyo qunsuliyadooda falkani ka dhacay.
Kooxda 15-ka nin ka koobnaa waxa ay isugu jireen Masuulka sirdoonka Sucuudiga u qaabilsan baadhitaanka xubnaha jidhka aadamaha, koox sawir iyo cod qaadayaal ah, sirdoonka gaarka ah ee Maxamed Bin Salmaan iyo xubno dilalka khaarajinta ah fuliya. Waxaanay magacyadoodu kala yihiin:
Mansuur Abaa Xuseen
Ugu dambayn Wargeyska Washington Post waxa uu shalay daabacay war la xidhiidha in dawladda Turkigu ay Maraykanka u gudbisay cajalad ay ku duuban yihiin cod argagax leh oo lagu sheegay in uu yahay cod ay ka heleen qalabka wax duuba ee qunsuliyadda Sucuudiga oo muujinaya markii Khashoggi la dilayay. Si kastaba ha ahaatee wali dawladda Sucuudigu ma aanay qiran dilka ninkaasi waxaanay shalay Turkiga u soo direen wafti ay sheegeen in ay Turkiga ka caawin doonaan sidii baadhitaanka loogu samayn lahaa Kiiska